Published at November 3, 2019 by डा. विवेक बन्धु रेग्मी
चिक यिल्ड (Chick yield) भनेको के हो?
इकुवेटर मेसिनमा लोडिंग भएको बेलाको अण्डाको तौलको अनुपातमा ह्याच हुँदा आउने चल्लाको तौललाई चिक यिल्ड भनिन्छ । इन्कुवेशनका सूचांकहरु (तापक्रम, आद्रता) र इन्कुवेशन अवधि ठिक भए-नभएको यकिन गर्नेसामान्य विधि पनि हो – चिक यिल्ड मापन ।
चिक यिल्ड आवश्यक भन्दा कम वा बढी हुनुले के संकेत गर्दछ ?
चिक यिल्ड कम हुनु भनेको लामो समयसम्म चल्ला मेसिन मै रहनु (यथोचित समयमा ह्याच निकाल्न ढिलाई हुनु) वा मेसिनको तापक्रम बढी हुनु वा आद्रता कम हुनु को संकेत हो । यस्ता चल्लाहरुमा डिहाईड्रेशनको शिकार हुने र फार्ममा पुगेपछि राम्रो उत्पादन नहुने जोखिम बढी रहन्छ । चिक यिल्ड बढी हुनु भनेको यथोचित समय अगावै चल्लाहरु मेसिनबाट निकाल्नु वा मेसिनको तापक्रम कम हुनु वा आद्रता बढी हुनु को संकेत हो । यस्ता चल्लाहरु फार्ममा पुगेपछि तुरुन्त दानापानी खान तयार हुदैनन् र अल्छी हुन्छन ।
अंकमा कति हुनुपर्ने हो चिक यिल्ड ? कतिलाई कम वा बढी मान्ने ?
चिक यिल्ड मापन ६७ – ६८ % हुनु सबैभन्दा उपयुक्त हो । यस्ता चल्लाहरु फुर्तिला हुन्छन र फार्ममा पुगेपछि तुरुन्त दानापानी खान तयार हुन्छन ।
चिक यिल्ड मापन ६७ % भन्दा कम हुनु भनेको सामान्य भन्दा कम हो । यस्ता चल्लाहरु प्रायगरी डिहाईड्रेशनको शिकार हुन्छन र यिनको भित्र योल्क भण्डार पनि निकै कम हुन्छ । साथै, यस्ता चल्ला बढी फुर्तिला देखिन्छन र यिनले बढी मात्रामा तिखो आवाज निकाल्ने गर्छन ।
चिक यिल्ड मापन ६८ % भन्दा बढी हुनु भनेको सामान्य भन्दा बढी हो । यस्ता चल्लाहरु अल्छी हुन्छन र फार्ममा पुगेपछि तुरुन्त दानापानी खान तयार हुदैनन् ।
 यदी ह्याच निस्केको एक दिन पछि मात्र फार्ममा चल्ला छोड्नुपर्ने बाध्यता हो भने चिक यिल्ड मापनसामान्य अवस्थामा भन्दा १ % बढी भएको अर्थात ६८ – ६९ % भएको उपयुक्त हुन्छ ।
 त्यस्तै मेसिनमा अण्डा तुरुन्त लोडिंग हुन नसकेर लामो समयसम्म भण्डारण गर्नुपरेको अवस्थामा चिकयिल्ड मान प्रत्येक हप्ताको लागि ०.५ % थप भएको उपयुक्त हुन्छ । उदाहरण: २ हप्तासम्म ह्याचिङ अण्डा भण्डारण गर्नुपरेको अवस्थामा चिक यिल्ड मापन ६८ – ६९ % लाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । सामान्यतया एक हप्ता भन्दा बढी समयको लागि ह्याचिङ्ग अण्डा भण्डारण गर्नु सकभर हुँदैन किनकी सो समय पश्चात ह्याचविलीटीमा व्यापक गिरावट आउँछ ।
चिक यिल्ड मापन प्रक्रिया
चिक यिल्डलाई ठिकसँग मापन गर्न ह्याच समयको राम्रोसँग हेक्का गर्नुपर्छ:
– प्रत्येक इन्कुवेटरको तीनवटा ट्रे बाट चिक यिल्डको मुल्यांकन गर्ने ।
– यस्तो डिजिटल काँटाको प्रयोग गर्ने जसले एउटा पुरै इन्कुवेटर ट्रे को तौल साथै चिक बक्सको तौल ५ ग्राम भन्दा बढी फरक (तलमाथि) नपर्ने गरि लिन सकोस ।
नोट: यो प्रक्रिया ह्याचारिमा “वाटर लस” मापन गर्ने प्रक्रियासँग सँगै जोडेर अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
२. ट्रे लाई सफा ह्याचिङ्ग अण्डाले भर्ने । फोहोर, फुटेको, बोक्रा कमसल भएको आदि ह्याचिङ्ग नहुने खालको अण्डालाई नलिने ।
३. अण्डाले भरिएको ट्रे को तौल लिने । तौल र अण्डा संख्याको अभिलेख राख्ने ।
५. ट्रान्सफर गर्ने बेला उपरोक्त ट्रे का अण्डा राखिने ह्याचर बक्समा पनि चिन्ह लगाउने ताकि ह्याच भैसकेपछि पनि चिन्न सकियोस ।
६. ह्याच निकालिसकेपछि डिजिटल तौल काँटामाथि खालि चल्ला बक्स राखेर त्यसलाई शुन्य बनाउने । ह्याचारिमा भेन्ट सेक्सिंग गर्नुपर्ने भएमा यो कार्य सेक्सिंग गर्नु अगाडी नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७. ह्याचर बक्समा भएका उपयुक्त बेच्न लायक चल्ला मात्र गनेर चल्ला बक्समा राख्ने र अभिलेख लिने ।
८. चल्लाको तौल लिने र अभिलेख राख्ने ।
चिक यिल्ड मापनको लागि हिसाब-किताब
% चिक यिल्ड = औषत चल्लाको तौल / अण्डाको औषत तौल * १००
सेटिंग गर्ने बेला अण्डाले भरिएको ट्रे को तौल = ८२०१ ग्राम
सेटिंग गरिएको अण्डा संख्या = १३२
ह्याचिङ्गको बेला चल्लाले भरिएको बक्स को तौल = ६२६८ ग्राम
ह्याच भएर निस्किएको बेच्न लायक चल्लाको संख्या = १२०
% चिक यिल्ड = (६२६८/१२०) / (८२०१-१२०५)/१३२ * १०० = ३५.६/५३.० * १०० = ६७.१%
चिक यिल्ड नतिजा विश्लेषण एवं आवश्यक प्रतिक्रिया
तल चित्रमा ३ वटा प्यारेन्ट फ्लकको प्रत्येकको ३ वटा सेटर प्रयोग गरि मापन गरिएको चिक यिल्ड नतिजा ग्राफमा क्रस चिन्हले इंकित गरिएको छ ।
नतिजा विश्लेषण : चिक यिल्ड सामान्य अवस्थामा भएको ।
आवश्यक प्रतिक्रिया : कुनै किसिमको प्रतिक्रिया आवश्यक नभएको ।
नतिजा विश्लेषण : चिक यिल्ड आवश्यक भन्दा केहि बढी भएको ।
आवश्यक प्रतिक्रिया : यो फ्लकको चिक यिल्ड पून: मापन गर्ने । फेरिपनि बढी देखिएमा तलको तालिका बमोजिम कारण पत्ता लगाउने र सोहि अनुसार सच्याउने ।
नोट: यदी चल्लालाई ह्याच भएको अर्को दिन मात्र फार्ममा राख्ने हो भने यो चिक यिल्ड लाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ ।
नतिजा विश्लेषण : चिक यिल्ड आवश्यक भन्दा धेरै कम भएको, डिहाईड्रेशनको उच्च जोखिम भएको । आवश्यक प्रतिक्रिया : तलको तालिका बमोजिम कारण पत्ता लगाई सोहि अनुसार सच्याउने ।
चिक यिल्ड लाई असर गर्ने कारक तत्वहरु
कम चिक यिल्ड का कारणहरु उच्च चिक यिल्ड का कारणहरु
अण्डालाई लामो समयसम्म मेसिनमा राख्ने छोटो इन्कुवेशन समय र पर्याप्त समय नपुग्दै ह्याच
निकाल्नु । लामो समय सम्म अण्डा भण्डारण गर्नाले वा
प्यारेन्ट फ्लकको उमेर धेरै कम वा धेरै बुढो भएको
बेलामा पनि यस्तो अवस्था आइपर्नसक्छ ।
उच्च इन्कुवेशन तापक्रम इन्कुवेशन तापक्रम न्यून हुनु
न्यून मेसिनको आद्रता मेसिनभित्र उच्च आद्रता हुनु